SADC : Tsena be ho an’ny sehatra tsy miankina -
AccueilRaharaham-pirenenaSADC : Tsena be ho an’ny sehatra tsy miankina
20/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nifarana ny sabotsy lasa teo tany Swaziland ny fihaonamben’ny SADC ka anisan’ny nandray anjara tamin’izany i Madagasikara. Nisy araka izany ny fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay mamaritra ny fanamorana ny fivezivezen’ny entana, fanamaivanana ny haba sy ny asa rehetra voakasik’izany eo amin’ireo tany mpikambana ao amin’ny SADC. Fanomezana anjara toerana goavana ho an’ny sehatra tsy miankina ity fanaovan-tsonia nataon’ny filoha ity. Fotoana tokony hanararaotan’ny sehatra tsy miankina tokoa araka izany ny fahavitan’izao sonia izao satria mampitombo ny tsena ho an’ny miantsehatra tsy miankina.
Lohahevitra maro no nodinihana sy notapahina nandritra iny Fihaonan’ny SADC tany Sawziland iny ary nahafahana nitady ny paikady eo amin’ny lafiny ara-toekarena, ny fametrahana sahan’asa ahatongavana amin’ny tanjona dia ny fampandrosoana ny indostrian’ny SADC sy ny tany mpikambana ao aminy. Noresahana manokana tamin’izany ny mikasika ny angovo mba ahafahana mamokatra angovo sehatra ny vahoaka, iaraha-mahalala rahateo ary nasian’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tsindrim-peo fa fanoitra goavana ho amin’ny fampandrosoana io resaka angovo io. Tsena be ho an’ny sehatra tsy miankina tokoa ny fahavitan’ilay sonia nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Afaka mifaninana amin’ny vokatry ny tany hafa ny vokatra avy amin’ny SADC ka ny tanjona dia ny hanondranan’ny SADC vokatra mahafeno ny fepetra, ny fenitra, ny haitao ary indrindra ny vidiny amin’ny vokatra any an-kafa. Ananan’i Madagasikara avokoa anefa ireny vokatra ireny ka izay no anisan’ny antony lehibe maha maika ny fitondrana tamin’iny fanaovan-tsonia iny mba ahazoana mametraka tsena lehibe sy mivelatra.
Inona no laharam-pahamehana?
Nivoitra nandritra iny dinika tany Swaziland iny ny tokony hametrahana rafitra mpanara-maso ary tokony hisy rahateo koa ny asa hita maso hilazana fa tena miasa ny SADC. Hisy araka izany ny fananganana ny oniversite an’i SADC, oniversite hanofana sy hampianatra asa avy hatrany mifanaraka amin’ny filan’ny SADC. Swaziland no nanolo-tena hanome vatsim-pianarana miisa 300, izany hoe, hanana mpianatra 20 avy isaka ny firenena mpikambana. Tafiditra tao anatin’ny laharam-pahamehana ihany koa ny resaka momba ny toetr’andro (tondra-drano, hain-tany) fa indrindra koa ireo bibikely izay namotika fambolena tany amin’ireny tany enina mpikambana ao amin’ny SADC. Tsy ny resaka ara-toekarena fotsiny ihany moa no tafiditra tao anatin’izay laharam-pahamehana izay fa teo koa ny olana ara-politika misy any Lezoto sy RDC.